အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ, နည်းပညာမြင့်ပစ္စည်းများသည်ပါးလွှာသောရုပ်ရှင်များသို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာသည်, နှင့်အပေါ်ယံပိုင်းကာလအတွင်း, သူတို့သည်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးသည်. ပစ်မှတ်သည်အပိုတန်ဖိုးမြင့်အထူးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်, ၎င်းသည်ပါးလွှာသောဖလင်ပြားများပြန့်ကျဲစေသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ သတ္တုမဟုတ်သောပါးလွှာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ်, ကြွေပန်းတိုင်များသည်မကြုံစဖူးတိုးတက်အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည်, ဦး တည်သောစျေးကွက်သည်တနေ့ထက်တနေ့တိုးချဲ့လာသည်။.
အိမ်တွင်းကြွေပြားပြားပစ်မှတ်များကိုအဓိကအားဖြင့် sintering နှင့် binding လုပ်ငန်းစဉ်များကိုသုံးသည်, အမြင့်ဆုံးအရှည် ၆၀၀ မီလီမီတာထုတ်လုပ်နိုင်သည်, အများဆုံးအကျယ် ၄၀၀ မီလီမီတာ, အများဆုံးအထူ ၃၀ မီလီမီတာ. လုံးဝန်းသောထောင့်များ, beveled အနား, အဆင့်များနှင့်အခြားအထူးပုံစံမျိုးစုံကိုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များအရလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။.
အသုံးများသောကြွေပစ်မှတ်များအဓိကပါဝင်သည်: ဒီပန်းတိုင်, မဂ္ဂနီဆီယမ်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, သံအောက်ဆိုက်ပစ်မှတ်, silicon nitride ကိုပစ်မှတ်ထားသည်, ဆီလီကွန် carbide ပစ်မှတ်, titanium nitride ပစ်မှတ်, ခရိုမီယမ်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, zinc oxide ပစ်မှတ်, silicon monoxide ပစ်မှတ်, cerium အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, Zinc sulfide ပစ်မှတ်, ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, zirconium ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, niobium pentoxide ပစ်မှတ်, တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, hafnium ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, titanium diboride ကိုပစ်မှတ်ထားသည်, zirconium diboride ပစ်မှတ်, tungsten trioxide ကိုပစ်မှတ်ထားသည်, အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်, ပစ်မှတ် Tantalum pentoxide, niobium pentoxide ပစ်မှတ်, magnesium fluoride ပစ်မှတ်, yttrium fluoride ပစ်မှတ်, zinc selenide ကိုပစ်မှတ်ထားသည်, aluminium nitride ပစ်မှတ်, silicon nitride ကိုပစ်မှတ်ထားသည်, ဘိုရွန်နိုက်ထရိုက်ပစ်မှတ်, titanium nitride ပစ်မှတ်, ဆီလီကွန် carbide ပစ်မှတ် , Lithium niobate ပစ်မှတ်, praseodymium titanate ပစ်မှတ်, barium titanate ပစ်မှတ်, lanthanum titanate ပစ်မှတ်, နီကယ်အောက်ဆိုဒ်ပစ်မှတ်, စသည်တို့.
(1) ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအရ, ၎င်းကို oxide ceramic target သို့ခွဲခြားနိုင်သည်, silicide ကြွေပစ်မှတ်, nitride ကြွေပစ်မှတ်, fluoride ceramic target နှင့် sulfide ceramic target, စတာတွေ .. သူတို့ထဲမှာ, flat display ITO ceramic ပစ်မှတ်ကိုတရုတ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးအသုံးချမှုမြင့်မားသော dielectric insulating film များနှင့်ဧရာမ magnetoresistance ကြွေပစ်မှတ်များအတွက် Ceramic ပစ်မှတ်များသည်ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချအလားအလာရှိသည်။.
(2) လျှောက်လွှာအရသိရသည်, ၎င်းကို semiconductor နှင့်ဆက်စပ်သော ceramic ပစ်မှတ်များအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်, ကြွေပန်းတိုင်များကိုပြသပါ, သံလိုက်မှတ်တမ်းတင်ကြွေပစ်မှတ်များ, optical မှတ်တမ်းတင်ကြွေပစ်မှတ်, superconducting ceramic ပစ်မှတ်များ, ဧရာမ magnetoresistance ကြွေပစ်မှတ်များ, စသည်တို့.
ကြွေထည်ပစ္စည်းများသည်လက်ရှိရှုပ်ထွေးသောအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှု၏အလွန်သေးငယ်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အခြေခံ ဦး ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါ ၀ င်တယ်။ ငါ့နိုင်ငံရဲ့အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်းကအလျင်အမြန်တိုးတက်နေတယ်, ကြွေရည်သုတ်တံပစ်မှတ်များဝယ်လိုအားသည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးလာသည်. ကြွေရည်သုတ်ခြင်းပစ်မှတ်များ၏အနာဂတ်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ပစ်မှတ်ပေးသွင်းသူများအတွက်အရေးကြီးသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။.
Prev: Sputtering ပစ်မှတ်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ရှစ်ဆင့်
Next: Sputtering ပစ်မှတ်များကိုလှည့်ပတ်သောအပူဖြန်းခြင်းအကြောင်း
» ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏ဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆနှင့် porosity သည်အပေါ်ယံ၏အရည်အသွေးကိုမည်သို့သက်ရောက်သနည်း။
» Sputtering ၏သြဇာသည်ကြီးမားသောဧရိယာအပေါ်ယံပိုင်းထုတ်လုပ်မှုတွင်သန့်ရှင်းမှုနှင့်ပစ္စည်းတူညီမှုကိုပစ်မှတ်ထားသည်
» ITO ပစ်မှတ်များ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
» ပစ်မှတ် sputtering ပစ်မှတ်အလတ်စားကြိမ်နှုန်း magnetron sputtering ၏အသိပညာကိုရှင်းပြပါ
ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏ဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆနှင့် porosity သည်အပေါ်ယံ၏အရည်အသွေးကိုမည်သို့သက်ရောက်သနည်း။